‘बैंकहरुको कारण बीमा कम्पनीको नाफा घटिरहेको छ’
‘बैंकहरुको कारण बीमा कम्पनीको नाफा घटिरहेको छ’ नारायण पौडेल -प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, प्रभु लाइफ इन्सुरेन्स लि.
जनतापाटी बिहीबार, मंसिर २५, २०७७ मा प्रकाशित
कोरोना महामारीले विमा कम्पनीको व्यवसायमा कस्तो असर पारेको छ ?
पहिलो पटक लकडाउन शुरु भएपछि गत चैत्र, बैशाख, जेठमा त काममा निकै असर पार्यो । कामै गर्न सकिएन, कार्यालय खोल्ने, कर्मचारीले काम गर्ने अवस्था नै रहेन । बीमा व्यवसाय भनेको प्रत्यक्षरुपमा मानिसहरुलाई भेटेर, उनीहरुलाई कुरा बुझाएर, कन्भिन्स गरेर गर्ने व्यवसाय हो । लकडाउनका कारण त्यो संभव नै भएन । मानिसहरुसंग भेटघाट गर्ने अवस्था नै नभएपछि व्यवसाय निकै धरमरायो, कसरी टिक्ने भन्ने अवस्था सृजना भयो । त्यसपछि भने क्रमिकरुपमा अवस्था सुधार हुंदै गैरहेको छ । अहिले हामी विस्तारै पुरानो लयमा फर्किदैछौं ।
बीमा गर्ने कर्मचारी वा अभिकर्ताहरुको स्वास्थ्य सुरक्षाको लागि के गर्नुभएको छ ?
अरु कम्पनीको बारेमा हामीले थाहा पाउने कुरा भएन, चासो पनि भएन । हाम्रो कम्पनीका कर्मचारी र अभिकर्ताहरुको लागि कोरोना बीमा गरिदिने देखि लिएर स्वास्थ्य सामाग्रिहरु उपलब्ध गराउनेसम्मका काम गरेका छौं । हाम्रा अभिकर्ताहरुले आफू सुरक्षित रहेर नै काम गरिरहेका छन् ।
त्यति बेला भएको घाटाको क्षतिपूर्ती गर्नुभयो ?
घाटाको क्षतिपूर्ती भन्दा पनि हामी विस्तारै कामलाई अगाडि बढाउंदै छौं । कोरोना माहामारी शुरु नहुंदैंको जस्तो अवस्था हुने त कुरा भएन, तर लकडाउनको समयमा जस्तो अवस्था छैन । कामहरु भैरहेका छन् । व्यवसायीक गतिविधि संचालन भैरहेका छन् ।
व्यवसायिक नाफा घाटाको कुरा वैंकको व्याजदरमा पनि फरक पर्छ । यसपटक वैंकहरुले मुद्धतीको व्याजदरमा साढे ३ प्रतिशतसम्म कटौती गरेका छन् । त्यसले गर्दा हाम्रो मात्र होइन, प्रायः सबै विमा कम्पनीहरुको नाफामा संकुचन आउने स्पष्ट छ ।
यसपटक नयां प्रडक्टहरु ‘लन्च’ गर्ने र शाखा विस्तारको काम त पूर्णरुपमा रोकियो नी होइन ?
महामारीको बेलामा अरु समय जस्तो सहज ढंगले काम हुने त कुरै भएन । त्यसैले नयां योजना भन्दा पुरानै योजनालाई व्यवस्थित गरेर काम गरिरहेका छौं । हामीले मात्र होइन, सबैको त्यस्तै छ । शाखा विस्तारको कुरा पनि त्यही हो । हामीसंग अहिले नै ९० वटा शाखा छन् । कुनै ठाउंबाट माग नआएसम्म अहिले शाखा थप गर्ने योजना छैन । यो ठाउंमा शाखा चाहियो भनेर माग भयो भने चांही सोंच्न सकिन्छ ।